Ungakugcina kanjani kufanelekile?
Ucabanga ukuthi ukugcina isimo esihle kufanele "uhlale" ejimini? Kunezinye izindlela eziningi zokufeza umgomo wakho.
Ukuzibuka futhi ube nenani elihle kunzima, kodwa kungenzeka. Sizokutshela mayelana nokungajwayelekile, ekuqaleni, izindlela ezizokusondeza kumzimba ongcono. Ukuzivocavoca okuncane ekhaya. Zenzele ukuya ejimini noma uhambe ekuqeqeshweni okulimazayo akukwazi wonke umuntu, futhi ube ne-mini-gym esandleni-indlela yokuphuma. Ukuphila okusebenzayo kunethonya elihle empilweni. Kuye kwafakazelwa ukuthi abagijimi baphila isikhathi eside futhi bancane amathuba okugula, yingakho uma ungena ezemidlalo ngeke uthole kuphela ukuzwana, kodwa futhi unakekele impilo yakho. Ukuze wenze lokhu, awudingi izindleko ezimangalisayo, imishini ethile kuphela: i-yoga mat, i-fitball, mhlawumbe i-pair of dumbbells, uma isabelomali ivumela, ungathenga enye ye-cardio-simulators, isibonelo, ibhayisikili-tracker. Uma ucabanga ukuthengwa kwayo, cela usizo kusayithi - lapho uzothola uhlu olukhulu lwezinhlinzeko ze-simulator, okungaphezu kwalokho, ezingalinganiswa ngentengo.
Hamba ukuhamba nenja. I-Trite, kodwa isebenza kahle. Cabanga ukuthi ukudlula indlu yakho nxazonke ngenkathi uhamba nenja, uzolahlekelwa yi-kcal ayi-70, futhi lokhu akukona okungaphezulu noma okuncane - ingxenye yesithathu ye-bar Snickers. Ukuzungeza indlu kathathu, ususa ngokuphelele amandla avela ekudleni, okuyinto engozini yokubeka ezinhlangothini. Ukuhamba njalo, futhi ukugijima nenja kuyokuvumela ukuba ushise ama-khalori. Futhi uma ungenaso isilwane, lesi yisikhathi sokuba bazuze: emindenini eminingi izinja ziphupha mayelana nezinja, kodwa manje abazali bangathola kulo mqondo inzuzo ngokwenza izilwane.
Yeka ukusebenzisa i-elevator. Uhlala esitezi sesishiyagalombili? Kuhle, ukhohlwa ukuthi kukhona khona i-elevator bese ukhuphuka izitebhisi wena. Futhi manje ake ucabange ukulwa nesiteleka esisodwa sezinyathelo - 12 kcal, futhi ukukhuphuka kusukela ku-1st ukuya kwesitezi sesishiyagalolunye kungaba ngu-200 kcal. Lokhu kuwukuqeqeshwa okuhle kakhulu komzimba wonke futhi ikakhulukazi emagodini, okusebenza lapho ukhuphuka amaphesenti ayikhulu.
Hamba ukuhamba. Ukuhamba ngezinyawo kule ndawo kuzokuvumela ukuba ususe 400 kcal ngehora. Shiya indlu futhi uhambe kaningi: lokhu kuzosusa amafutha angaphansi kwesikhumba, igcwalise igazi nge-oxygen futhi ijabule. Ukuhamba ngezinkampani, ngeke uqaphele ukuthi isikhathi siyodlula kanjani.
Vumelanisa ukufeza noma yimiphi imiyalo. Isibonelo, udinga ukugcwalisa imikhiqizo yesiqandisisi, futhi ufike esitolo esifanele, akudingeki usebenzise ukuthutha - thatha isikhathi sokuhamba esitolo ngezinyawo.
Gcina indlu ihlanzekile. Ihora elilodwa lokuvuna okusebenzayo lilingana nama-khalori angu-300 ashise. Geza phansi, usula uthuli, ususe amathisa amagesi ekhishini. Ngenxa yalokho, indlu ihlanzekile futhi uzimisele!
Yiya echibini. Ukuzijabulisa kwamanzi nokubhukuda kungukudla okunomsoco kanye nemisebenzi ehlabayo engakwazi ukushisa amafutha. Esigodini ungalahlekelwa ngamakholori angu-263 kuya ku-400. Isibonelo, uma nje ushisa amanzi, khona-ke uzosebenzisa inani eliphansi lamandla, uma ngezikhathi ezithile ugijima, kakade kakade amakholori angu-400 ngehora.
Hlela utshani ngokwakho. Ukunakekela indawo eseduze, sivame ukufundisa ochwepheshe, kepha kuvela ukuthi ukuphathwa okuzimele kwe-lawnmower kukuvumela ukuba ushise kuze kufike kuma-250 kcal ngehora. Ngesikhathi esifanayo, ugcine imali futhi uthuthukise amafomu akho.
Fihla ibhayisikili yakho. Isivinini esisheshayo sokushayela (20 km / h) sikuvumela ukuba ususe 574 kcal ngehora. Lokhu kuyinkcitho enkulu yamandla nomzamo omncane kakhulu. Ukuhamba ngebhayisikili kunethonya elihle ekujikelezeni kwegazi, umbono nokuqeqeshwa kokukhuthazela.
Shiya ezokuthutha zomphakathi ezimbalwa zokuyeka, ukuhamba futhi.
Le miisebenzi elula izokuholela emafomu afanele - ukubekezela okunamandla kanye namandla.
Njengoba sekuyiminyaka engama-48 ukuhlala owesifazane okhanga kakhulu emhlabeni: ukudla nesenzo sokuzivocavoca uJennifer Lopez
Umshini omuhle ngaphandle kokuphuma embhedeni? Iresiphi kusuka ku-Ani Lorak
Indlela yokuhlala nge-twine: isipiliyoni semidlalo sika-Alena Khmelnitskaya
Ukuhlolwa kwezemidlalo okuqala kwe-Comedy Club Marina Kravets
Ukubuka kanjani iminyaka engu-10 encane
Ukuthungwa kwe-algal ekhaya
Izindlela ezitholakalayo zokulwa nokucindezeleka
Izambatho zilungisa kanjani amaphutha?
Izifo zezimpawu zodiacac: Iziphi izifo ezifakwe esibonakalweni sakho
Ukupheka kwe-Lenten ngezithombe kulula futhi kuyamnandi nsuku zonke ze-Lent. Ama-Lenten pies, cutlets, borsch, isobho, amazambane, izifundo zesibili iklabishi for zokupheka okumnandi
I-Risotto ene-bell pepper
I-Psychology yobuhlobo: owesilisa ushaya owesifazane
Ubuvila, ubuthakathaka, ukulala: indlela yokukhipha
Ihlobo eSt. Petersburg: I-Gate Gate linehlobo lwe-Summer 2017
I-iresiphi yeshizi elenziwe
Umbala wezinwele nomlingiswa womuntu
I-Horoscope ngo-December 2017 kusuka kuVasilisa Volodina
Faka i-inkukhu ensizweni enokhilimu